Tenga Premium CBD poda & mafuta zviri pamutemo gadzira fekitori
CBD yakawana traction munguva pfupi yapfuura, kunyanya pakati pevadiki. Inenge 20 muzana yevanhu vari pakati pemakore gumi nemasere nemakore makumi maviri nemapfumbamwe vanoshandisa imwe mhando yeCBD, nepo 18 muzana chete yevanhu vanopfuura makore makumi matanhatu neshanu vanoshandisa CBD. Vanhu vezera repakati vatangawo kubata vanhu vadiki uye vanosvika makumi matatu muzana muzana vezera iri vanotora mukushandisa kweCBD, kungave mumafuta, hupfu, kana kupfapfaidza fomu.
Vazhinji vevashandisi vanoti vanoshandisa ichi chigadzirwa kugona kwayo kubvisa marwadzo uye kudzikamisa zviratidzo zvekushushikana uye kumwe kusagadzikana-sekushushikana kwepfungwa. Iko kushandiswa kweCBD kwakakwidziridzika mushure mekunge chinzvimbo chepamutemo chembanje chachinja, izvo zvisina kufanana neCDD. Nekudaro, kubvumidzwa kwepamutemo kwembanje kwakabatsira kubvisa ruzvidzo rwakanangana nekushandiswa kwarwo uye kushandiswa kwema cannabinoid anowanikwa mumuti wacho pachawo.
Chii CBD (Cannabidiol)?
Cannabidiol kana CBD ndeye phytocannabinoid iyo inotorwa kubva kune zvinomera zvecannabis uye ndeimwe yezvinhu zvikuru zvemuti wembanje, uye wemuzukuru wayo chirimwa, hemp iyo inovapa iwo marwadzo ekugadzirisa marwadzo. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti cannabidiol inotorwa kubva kune hemp chirimwa, chiri cheboka rezvirimwa zve cannabis asi hachisi icho chinonzi mbanje. Sezvo inoburitswa kubva kune hemp chirimwa, haina chero psychoactive zvimiro zvinoreva kuti haigone kuita vanhu 'kukwirira'.
Cannabis sativa chirimwa, mune chakasarudzika, mbanje chirimwa chinokwanisa kuita kuti vanhu vanzwe kukwirira kuburikidza nemhedzisiro yeDelta-9-tetrahydrocannabinol kana THC, imwe phytocannabinoid yakatorwa kubva kune cannabis zvirimwa. Mbanje ine huwandu hwepamusoro hwe THC kupfuura zvimwe zvirimwa zvecannabis zvakaita sehemp, ndosaka iine masimba epfungwa pakati pezvimwe zvirimwa. CBD inotorwa kubva kune hemp chirimwa icho chakapfuma muCDD asi chine zvishoma zvishoma THC, ichiita sarudzo yakanaka kune vanhu vangade kuwana mabhenefiti eCannabis sativa chirimwa pasina iyo psychoactive mhedzisiro.
Mhedzisiro yeCBD neTHC yakafanana mune dzidziso yekuti zvese zvinokanganisa makemikari akasiyana kana maurotransmitter muuropi asi imwe neimwe cannabinoid kemikari inokanganisa makemikari akasiyana uye ine maitiro akasiyana pavari, nekudaro ichiburitsa mhinduro dzakasiyana.
Cannabidiol yakatanga kuwanikwa muna1940 seyisiri-psychoactive phytocannabinoid muzvirimwa zvecannabis asi zvakazosvika gore ra2018 apo USA yakabvisa iyo, pamwe chete nemuti wayo wemubereki, hemp, kubva kuRondedzero yezvinhu zvinodzorwa. Nekudaro, zvichiri zvisiri pamutemo kuti vanhu vashandise cannabidiol powders, CBD maoiri, kana zvimwe zvigadzirwa zveCDD mune yavo yakachena fomu kana chero fomu senge ingangoita yekurapa kana chinhu chinowanikwa mune yekuwedzera yekudya.
Mishonga yeCDD inotenderwa neKudya neDrug Administration kana FDA muUnited States of America yekurapa pfari uye kushushikana kwepfari. Izvo zvinokurudzirwawo kune zvimwe zvekurapa asi, zvichiri kuwana FDA's uye nedzimwe nyika 'zviremera zvehutano mvumo zvisati zvave muyero wekutarisira.
CBD Inoshanda Sei Pamuviri?
Muchokwadi, nyanzvi dzanga dzichikurukura musoro wekuti "CBD inoshanda sei pamuviri wemunhu" kwemakore mazhinji. Zvinotaridza kuti nharo ine hunyanzvi yakawanikwa. Masayendisiti anotenda kuti CBD inoshanda zvisina kunangana pane endocannabinoid system kuti ishandise mabhenefiti ayo. Tisati tanzwisisa mashandiro anoita CBD pamuviri wedu, tinofanira kutanga tanzwisisa kuti chii chinonzi endocannabinoid system uye iripo sei mumuviri wedu?
Chii chinonzi Endocannabinoid System (ECS)?
"Cannabinoid" inouya kubva ku "cannabis," uye "endo" ipfupi kune "endogenous," zvinoreva kuti inogadzirwa zvakasikwa mukati memuviri wako. Saka "endocannabinoid" inongoreva cannabis-senge zvinhu izvo zvinowanzoitika mukati medu.
Iyo ECS pachayo inoumbwa nezvikamu zvitatu:
Vagashiri (CB1, CB2) muhurongwa hwekutyaira uye nekukomberedza muviri wako iwo endocannabinoids uye cannabinoids bond nawo. (CB1 zvinogamuchirwa zviripo mumuviri wese, kunyanya muuropi. Zvinoronga kufamba, kurwadziwa, manzwiro, manzwiro, kufunga, kuda kudya, ndangariro, uye mamwe mabasa. . CB2 zvinogamuchirwa zvakajairika mune immune system. Zvinokanganisa kuzvimba uye kurwadziwa)
③ Maenzyme iyo inobatsira kuputsa endocannabinoids uye cannabinoids
Kwete chete iyo ECS chikamu chechisikigo chemuviri wedu, asi zvakare yakakosha. Iyo endocannabinoid system (ECS) inoita chinonakidza uye chakasiyana chikamu mukati memuviri. Pakunyanya kukosha kwayo, iyo endocannabinoid system inetiweki yakakura ye cannabinoid receptors inopararira nemuviri. Iyo endocannabinoid system yemunhu inoburitsa cannabinoids iyo inosangana neakagashira anowanikwa mune angangoita ese matishu mumiviri yedu. Iwe unogona zvakare kutora phyto-cannabinoids (CBD) kuwedzera kune iwo makomponi anogadzirwa nemuviri wako kubatsira kusimudzira ino system. Basa re endocannabinoid system ndere kuunza kuenzana kumatishu edu, kusanganisira moyo, kugaya, endocrine, immune, huta, uye masisitimu ekubereka. Muchidimbu, iri kushanda kuti urambe usina kwawakarerekera. Kusarerekera kunoreva zvinhu zvakasiyana munzvimbo dzakasiyana dzemuviri wako, icho chingangove chimwe chezvinhu zvakanakisa nezve mukomboni - zvinogona kukanganisa zvakasiyana pane zvinogamuchirwa mumuviri wako.
CBD, mukupesana, haina psychoactive, haizokudzora uye kukuita iwe muropa mushure mekushandisa CBD kana CBD zvigadzirwa. CBD haichinji mamiriro emunhu kana achinge achishandisa. Nekudaro, inogona kuburitsa shanduko dzakakosha mumuviri, uye iri kuratidza zvimwe zvakakosha pakurapa.
Masayendisiti akambotenda kuti CBD yakanamatira kune avo vanogamuchira CB2, asi zvidzidzo zvitsva zvakaratidza kuti CBD haibatanidzi zvakananga kune inogamuchira. Pane kudaro, zvinotendwa kuti CBD inokonzeresa endocannabinoid system zvisina kunangana. CBD 's Indirect Effect On the Endocannabinoid System Kana mumwe munhu achitora CBD, mukomboni unopinda muhurongwa hwako uye kune endocannabinoid system (ECS) .Sezvo cannabidiol yakawanikwa isina hukama hunosunga, masayendisiti anotenda kuti maBDD ekurapa mabhenefiti akagadzirwa kuburikidza zvisina kunangana chiito.
CBD inhibits fatty acid amide hydrolase (FAAH), iyo inopwanya anandamide uye kuishayisa simba. CBD inoderedza FAAH, inotungamira mukuwedzera kweanandamide. Anandamide inoonekwa se "bliss molecule" uye inoita basa rakakosha muchizvarwa chemafaro uye kurudziro. Iko kuwanda kwekuwedzera kweanandamide kunogona kuve nemhedzisiro pane iyo endocannabinoid system.
CBD inokanganisawo mafuta asidhi anosunga protein (FABP). FABP mapuroteni anosunga kune anandamide uye anotakura iyo enzyme kunze kweiyo synapse kuti iputsike uye ishandiswe neFAAH. CBD inokanganisa mafambisirwo eFABP kuitira kuti shoma anandamide ishandiswe muviri, zvakare zvichikonzera kuwanda kwakanyanya kweanandamide.
Pakupedzisira, CBD inozvisunga kune iyo G-protein receptors inozivikanwa seTRPV-1. TRVP-1 receptors inobatanidzwa mukugadzirisa marwadzo, kupisa kwemuviri, uye kuzvimba. Zviri kuburikidza nechisungo ichi masayendisiti anotenda kuti CBD inobatsira nekuzvimba uye zororo remarwadzo.
Mune rimwe shoko, Iyo endocannabinoid system inobatsira kuchengeta muviri uri homeostasis. Kana ukamwa, Cannabidiol inogona kubatsira kukwidziridza kugona kwemuviri wedu kuti ushande zvakanaka. CBD inopindirana neiyo cannabinoid, dopamine, opioid uye serotonin receptors mumitumbi yedu, wobva wawedzera akawanda emabasa emuviri wedu.
Hutano Kubatsira kweBDD
Mukurumbira weBDD uye mukurumbira zvinogona kuverengerwa kune mabhenefiti akasiyana ainayo pamuviri wemunhu, mazhinji acho asina kungoongororwa chete asi nekuda kwezvidzidzo izvi, zvinotsigirwa neuchapupu hwesainzi. Pamberi pemutemo uye kushandiswa kwakapararira kwekomboni, mhando dzinoverengeka dzekutsvagisa dzakaitiswa kwete kungoongorora zvingangoshandiswa uye mabhenefiti eCDD asiwo kuongorora nekuongorora kuchengetedzeka uye kungangoita huturu hwekomboni.
Iwo mazhinji mabhenefiti eCDD akataurwa pazasi, pamwe nezvidzidzo zvakasiyana zvakaratidza iwo mabhenefiti.
♦ Pain Management uye Ruregerero
Vanhu vazhinji vanofarira kushandisa CBD kune iyi bhenefiti zvakanyanya. Kune marekodhi embanje ari kushandiswa seanonyaradza marwadzo, kuenda kumashure senge 2900 BC. Zvirimwa zveCannabis zvinogona kuita semarwadzo ekurwadziwa uye kubvisa marwadzo emhando dzakasiyana semhedzisiro yezvavanoita pane iyo cannabinoid receptor mumuviri.
Muviri wemunhu une endocannabinoid system kana ECS munzvimbo yekubatsira nemabasa akakosha akadai sekurara, kudya, uye kupindura immune. IEEC inoona nezve kuburitswa kweinogino cannabinoids iyo inoshanda pane iyo cannabinoid receptor uye inoderedza marwadzo, inowedzera mhinduro dzemumuviri, inokurudzira nzara uye kurara kutenderera. CBD uye THC zvese zviri zviviri cannabinoids iyo kana ikatorwa nemuromo kana nemusoro wenyaya, inobatana uye inosunga pamwe nevanogamuchira cannabinoid. Sezvo izvi zvakawandisa cannabinoids zvakafanana neinogumira cannabinoids, vanogona kuburitsa mhedzisiro yakafanana neyeyekupedzisira, kunyange zvavo mhedzisiro yavo ingave yakanyanyisa kuwedzeredza.
Muna 2018, vaongorori vakaita meta-ongororo yemabhuku ese akaburitswa kusvika 2017 pamusoro pekubatsira kwe cannabidiol kushandiswa mune varwere vane marwadzo europathic nekuda kwezvirwere zvakaipa. Gumi neshanu pane gumi nesere ezvidzidzo zvakabatanidzwa mune ino meta-ongororo yakawana kuti varwere vazhinji vakasunungurwa pakurwadziwa kwavo mushure mekutora musanganiswa we 27mg THC uye 25 mg CBD.
Zvakare, zvese zvidzidzo zvakawana kuti mhedzisiro yakakomba yemusanganiswa uyu yaive svoto, muromo wakaoma, uye kurutsa. Iyi mhedzisiro yakanga isipo mumurwere wese uye avo vakawirwa havana kuita zvakakomba zvakakwana. Izvi zvakaita kuti vaongorori vapedzise kuti THC neCDD shandisa, inogona kurapa zvine mwero marwadzo europathic uye inoregererwa nenjodzi diki yemhedzisiro.
Kune akawanda marudzi akasiyana ekutsvagisa akaitwa kutsigira kushandiswa kweCBD seinorwadza. Kumwe kutsvagurudza kwakadaro kwakanangana nekushandiswa kweCBD kune ayo immunomodulatory uye anti-kupisa zvivakwa. Chidzidzo cheItaly chakaitwa pamhando dzemhuka uye vaongorori mune ino ongororo vakaedza kugadzirisa maronda ekurwadza asingagumi mumakonzo vachishandisa CBD yemuromo. Vakaona kuti apo 20 mg / kg yeCDD yakapihwa kumakonzo ane kurwadziwa kwekusingaperi, makonzo airatidza kuderera kukuru mukurwadziwa. Saizvozvowo, ivo zvakare vakadzidza zvinoitika zveCBD pane marwadzo europathic mumakonzo ane sciatic nerve kukuvara uye kunyangwe zvaigona kubvisa marwadzo, zvakaonekwa kuti CBD yainyanya kubatsira mumatunhu asingagumi ekurwadziwa.
Vanhu vazhinji vanotora CBD maoiri kana mapiritsi kana mapiritsi ekurwadziwa kusingaperi, uye ndicho chimwe chezvikonzero zvikuru zvekuzivikanwa kweCDD nembanje. Kwaivewo kubatsirwa uku, pakati pevamwe vazhinji, kwakatungamira mukushandiswa kwakazara kweCBD uye mbanje zvichitungamira mukumisikidzwa kwemakomponi uye kubviswa kweCBD kubva kuRondedzero yezvinhu zvinodzorwa.
♦ Kurapa Kwechirwere uye kumwe Kushushikana Kwepfungwa
Kufenda kunonyanya kusanganiswa nepfari asi zvimwe zvinokonzeresa zvinogona kuburitsa pfari dzakadai seDravet Syndrome, Tuberous Sclerosis Syndrome, zvichingodaro. Iyo yakachena fomu yezvigadzirwa zveCBD yakafungidzirwa kuve neanorwisa-pfari kana ekurwisa-kubatwa mhedzisiro asi zvaingova munguva pfupi yapfuura pakanga paine humbowo hwekongiri hwesainzi hwakatsigira iyi fungidziro.
Pakutanga, paive nemakakatanwa akati wandei zvine chekuita nekushandiswa kweCDD kunyanya pakurapa pfari uye kumwe kushungurudzika kwekubatwa. Izvi zvaive zvakanyanya nekuti kunyangwe CBD iri anticonvulsant, mune mamwe mamiriro akaomarara, inogona kuita seanobvongodza. Zvisinei, mushure mekusiyana kwakapetwa kaviri-bofu, kuongororwa kwemaitiro emakiriniki akaitwa, zvakaonekwa kuti handizvo. CBD uye THC zvakawanikwa zviri zviviri anticonvulsants mune zvakasikwa.
Semhedzisiro yezvidzidzo zvakati wandei, zvakawanikwa kuti yakachena CBD mapoda uye CBD hemp mairi, pakati pezvimwe zvigadzirwa zveCDD, canareanage uye kurapa pfari dzinokonzerwa ne pfari, Dravet Syndrome, Tuberous Sclerosis Syndrome, uye Lennox-Gastaut Syndrome. Kutevera kuwanikwa uku, GW Pharmaceuticals yakagadzira mushonga une yakachena CBD concentrate inonzi Epidiolex iyo yakatogashira FDA mvumo yekushandisa semushonga wekubata.
Nekudaro, zvakakosha kuti uzive kuti hazvisati zvichizivikanwa kana zvigadzirwa zveCDD zvakatengwa kubva kune akasiyana CBD kupatsanura vagadziri zvinoshanda seEpidiolex mukugadzirisa zviratidzo zveaya matambudziko ekubatwa. Izvi zvinonyanya nekuti havazi vese vanogadzira poda eCDD uye vePDD vanopa hupfu vari kupa chaiyo, yakachena CBD mapoda nezvigadzirwa asi zvigadzirwa zvakashatiswa izvo zvisina kunyanyowanda, uye nekudaro, hazvishande. Izvo zvakakosha chaizvo kuti utenge chete kubva kune vakavimbika vatengesi vanotengesa zvemhando yepamusoro, yakachena zvigadzirwa zveCDD.
Vanotsvagurudza parizvino vari kuyedza kuongorora mashandisirwo eCDD neTHC pamwechete kana kushandiswa kweCBD chete mukugadzirisa nekurapa kurwisa kusingabatiki kurapwa, sezvo zvichikanganisa hupenyu hwevarwere uye zvinowanzo kukonzera hupenyu hwakaderera zvakanyanya.
Odha CBD Powder & Oils Zvino!
Edu Deredza Kushushikana uye Kushushikana
Iko kushandiswa kwe cannabidiol kwakaratidzirwa kuve kune kushushikana uye anti-kushushikana mhedzisiro mune akati wandei mhuka mhando. Mune chidzidzo cheBrazil chakaitwa pamakonzo, zvakaonekwa kuti CBD ine mhedzisiro yakafanana neimipramine, inozivikanwa inorwisa-kushushikana pane hippocampus yemakonzo akashungurudzika. Chidzidzo ichi chakaitwa kuti chiongorore mhedzisiro ye cannabidiol pane kushushikana uye kuongorora chaizvo kuti CBD ingaburitse sei izvo mhedzisiro.
Yakawanikwa nevatsvakurudzi kuti CBD yakashanda pane serotonin receptors, kunyanya 5HT-1A receptors kuti ibudise iyo inorwisa-depressant mhedzisiro. Zvakawanikwa zvakare kuti, kuti CBD ibudirire, kumisikidza BDNF kana Brain-yakatorwa neurotrophic factor yaidikanwa.
Nekudaro, chidzidzo ichi chakanangana nemhedzisiro yeCBD pane mhando dzemhuka uye mhedzisiro yakafanana haina kukosha kuti ibudiswe muvanhu zvakare. Ichi ndicho chikonzero chidzidzo chakaitwa pa57 vakagwinya, varume vakuru kuti vaongorore kana CBD iine zvinovhiringidza uye inorwisa-kushushikana pavanhu zvakare. Mune ino yeBrazil yakapofomara-yakapofumara, yakasarudzika kiriniki kuyedzwa, kushandiswa kweCBD kwakaongororwa kuchipesana nenzvimbo inocherechedzwa kuongorora mhedzisiro uye zvakaonekwa kuti mhedzisiro yeCBD mumhuka inoteedzerwa muvanhu zvakare. Izvi zvinoreva kuti kushandiswa kweCBDD kune mukana wekudzora kushushikana uye kushushikana muvanhu.
Cannabidiol oiri uye mapoda anofungidzirwa kuti anoita basa rakakura pakurapa uye manejimendi yekushushikana kwevana uye kusagadzikana kwePTSD, sekurudziro yenyaya yenyaya yakaburitswa navanachiremba paUniversity yeColorado.
Chengetedza Zviratidzo Zvinoenderana neCancer
Gomarara nekenza kurapwa zvinowanzoburitsa zvisina-chaiwo zviratidzo sekusvotwa, kurutsa, uye kurwadziwa. Zviratidzo izvi zvakaoma kubata kunyanya sezvavanodzokororwa neese maronda ekenza kurapwa. Nekudaro, ongororo dzichangoburwa dzinoratidza kuti zviratidzo zvine chekuita nekenza senge zvataurwa pamusoro zvinogona kutarisirwa neCBD kana musanganiswa weCDD neTHC.
Chidzidzo chakaitwa muUnited Kingdom pavarwere zana nemakumi manomwe nenomwe chakaitwa kuti chiongorore kuchengetedzwa nekubudirira kweCBD uye THC mubatanidzwa seanopioid analgesics mune varwere vane maronda ane hukama nekenza. Mhedzisiro mhedzisiro yeongororo yakaratidza kuvimbisa mhedzisiro sezvo vazhinji varwere vachitora iyo CBD uye THC musanganiswa yakashuma kuderera kukuru kwekutambudzika, kanenge kaviri zvakapetwa kupfuura iro boka re placebo. Izvi zvinoratidza kushanda kwezvose cannabinoids pakurapa uye kugadzirisa marwadzo muvarwere vegomarara.
Zvakare, vaongorori muchidzidzo chimwe chete vaive vakatsunga kuwana kushivirira kweiyi ingangoita yekurapa mutsva muvarwere vegomarara sezvo marapirwo mazhinji egomarara aine mhedzisiro yakawanda inosangana navo. Izvo zvakawanikwa kuti CBD uye THC zvakanyatsoshivirirwa nevarwere uye musanganiswa wacho hauna kuburitsa chero mhedzisiro yakaipa inofanirwa kutaurwa.
Chemotherapy ndiyo inonyanya kurapa mhando dzese dzegomarara asi haina kutenderwa nemuviri wemunhu uye inogona kukanganisa hutano. Imwe yemigumisiro mikuru iripo mune vangangoita varwere vese vari kurapwa chemotherapy ndeye chemotherapy-induced nausea uye kurutsa kana CINV. Kunyange zvazvo mishonga yakawanda yeantiemetic iripo, mimwe yacho yakananga CINV, haisi nguva dzose inoshanda. Nekudaro, tsvakiridzo yakaitwa muBarcelona yakawana kuti kushandiswa kweCBD kunogona kubatsira kuzorodza varwere vane CINV nepamusoro pekuita kupfuura mishonga yeantiemetic yakagadzirirwa CINV.
♦ Neuroprotective Properties
CBD ine mabhenefiti akati wandei kurwisa kusagadzikana kweurouropsychiatric uko kwainotarisa akasiyana maurotransmitter receptors uye cannabinoid receptors kuburitsa izvi zvakanaka mhedzisiro. Mushonga weCBD, Epidiolex unobvumidzwawo neDFA nezviremera zvehutano pasirese kurapwa kwekugwinha nekuda kweEpilepsy uye zvimwe zvinetso zvekubata.
Tichifunga nezve mabhenefiti aya, akati wandei ekutsvagisa akaitwa kuti aongorore mhedzisiro yeCBD pane mamwe matambudziko europi, senge Alzheimer's uye Multiple Sclerosis.
Chidzidzo chakaitwa kuGerman chakadzidza mhedzisiro yeSativex, iyo oro-mucosal CBD spray pane mhasuru spasticity inoonekwa nevarwere vane multiple sclerosis. Varwere ava vakatambura nemushonga unodzivirira mhasuru spasms uye CBD kupopera, mune varwere ava, yakashandiswa senge yekuwedzera kurapa kune aripo marapirwo.
Izvo zvakaonekwa kuti iyo yakawanda sclerosis varwere yakashivirira Sativex uye yakanga isina maitiro akashata semhedzisiro yekushandisa kweSativex. Zvakare, vashandisi veSativex vakashuma kuderera kukuru kwemhasuru nekurwadziwa, izvo zvakakonzera kuti vaongorori vakurudzire kushandiswa kwemafuta eCDD, hupfu, uye pfapfaidzo kuvarwere vanorwara nemhasuru dzinokatyamadza uye kutsemuka nekuda kweMS.
Chimwe chidzidzo chakaitwa kuti chiongorore mhedzisiro yeCDD paAlzheimers varwere chakaratidzawo mibairo inovimbisa, nekudaro zvichiratidza kuti CBD ine neuroprotective zvivakwa. Parizvino, chirwere cheAlzheimer hachirapike neurodegenerative kusagadzikana iyo yakambovapo, haigone kudzikiswa mukufambira mberi kana kudzoserwa zvachose. Nekudaro, in vitro mhedzisiro yeCDD pane maseru ehuropi inoratidza mufananidzo mutsva uye inopa tariro kuvarwere vanorwara neAlzheimer's.
Kuvandudza iyi dzidziso iyo inoumbwa mune in vitro mhedzisiro yeCDD, zvidzidzo zvakaitwa pamhando dzemhuka kuti tione kana Alzheimer's inogona kudzoserwa nekutsamwa kurapwa neCBD. Makonzo ane kukanganisika kwekuziva uye gliosis, chimiro chekuumba mavanga muuropi, semhedzisiro yeAlzheimer's yakapihwa CBD sechikamu chechidzidzo ichi. Izvo zvakaonekwa kuti CBD yakadzora mavanga ekuumbika muuropi uye zvakakonzera neurogenesis kana kuvandudzwa kwemaseru matsva ehuropi kurwisa kurasikirwa kwemasero nekuda kweyakagwinya gliosis. Zvakare, CBD yakawanikwa ichidzosera kuperevedza kwekuziva kunoonekwa mumhando dzemakonzo, nekudaro ichipa tariro yekuti Alzheimer's inogona kudzoserwa uye kurapwa, mune ramangwana.
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti mizhinji yemhedzisiro iyi yakaburitswa mumhando dzemhuka uye mhedzisiro iyi inofanirwa kudzokororwa mumakiriniki ekuedzwa pamwe nezvidzidzo zvevanhu CBD isati yashandiswa inogona kuve muyero wekutarisira.
Management Acne Management uye Kurapa
CBD yakawana traction nekuda kwayo analgesic, anxiolytic, uye anti-kuzvimba zvivakwa. Iyo ndiyo inorwisa-kupisa zvimiro zveiyi cannabinoid iyo yakatungamira mukushandisa kwayo seanorwisa-acne mushonga. Acne inofungidzirwa semhedzisiro yekuzvimba, mabhakitiriya, uye yakawanda sebum kugadzirwa. Mune ongororo yakaitwa kuongorora iyi chivakwa chemafuta eCDD, zvakaonekwa kuti CBD inodzivirira kuzvimba uye nekudaro kukura kwecystic, kupisa acne nekudzivirira kuchengetedzwa kwepro-acne kuputira cytokines muganda. Zvakare, chidzidzo ichi chakawana kuti CBD inogona kuchinja sebum mazinga paganda nekunangisa kugadzirwa kwayo uye kuidzikisa, zvakananga.
CBD parizvino iri kushandiswa mune dzinoverengeka zvigadzirwa zvekuchengetedza ganda uye emusoro mamiririri ayo anoshambadzwa seanorwisa-acne zvigadzirwa. Nekudaro, zvakakosha kuti uwane zvigadzirwa zvine rumwe rudzi rwetekinoroji kubatsira kuti chigadzirwa chinyurwe muganda remunhu. Izvi ndezvekuona kuti inopinda mukati meganda uye inoderedza kuzvimba kubva mukati.
♦ Antipsychotic Zvivakwa
CBD inoshandiswa zvakanyanya pakukwanisa kwayo kugadzirisa kusagadzikana kweurouropsychiatric, ndosaka mhando dzinoverengeka dzekutsvagisa dzichiitwa pane zvimwe zvinogona kuita antipsychotic mhedzisiro yeCDD. Uye zvizhinji zvezvidzidzo izvi zvakaratidza mhinduro yakanaka.
Kushandiswa kweCannabis kunofungidzirwa kuti ikozvino kunoguma mukuvandudzika kweschizophrenia, chirwere chisingaperi chetsinga ine psychosis-kunge zviratidzo. Zvidzidzo zvitsva zvakafungidzira kuti kushandiswa kweCBD kunogona kubatsira mukugadzirisa uye kupokana nepfungwa dzinoonekwa neschizophrenia, iyo inokura semhedzisiro yekushandisa kannabis, uye iyo inokura semhedzisiro yemagetsi, pasina kubatanidzwa kwecannabis. Iyo inogona zvakare kudzoreredza iyo psychosis iyo dzimwe nguva inoonekwa neacute manejimendi yeTHC.
Mhedzisiro iyi inoratidza kuti CBD ine antipsychotic zvimiro zvinoda kuongororwa zvakare sezvo mabhenefiti aya anogona kuve akakosha kwazvo pakurapa.
♦ Kurapa uye manejimendi eDrug Abuse Dambudziko
Kupindwa muropa nezvinodzvinyirira kunovandudzwa semhedzisiro yekuita kwemishonga pane masekete etsinga, ichiita kuti vanhu vade uye vavimbe nemishonga iyi. Mune ongororo yemabhuku yakaitwa nevatsvagiri kuongorora kushandiswa kweCDD senzira yekurapa yezvinodhaka, zvakaonekwa kuti CBD inogona kusangana nemasekete eeuronal uye kuvadzivisa, zvichikonzera kudzikira kwekusuwa uye kutsamira pane izvi zvigadzirwa.
Kuongorora kwemabhuku kwaisanganisira zvidzidzo zve14, 9 yazvo yakaitwa pamhando dzemhuka, kunyanya mbeva. CBD yakawanikwa ichinyanya kubatsira kurwisa maopioid, cocaine, psychostimulant, mudzanga, uye kupindwa muropa ne cannabis. Nekudaro, izvo zvaive zvekutanga mhedzisiro uye zvimwe zvabuda zvisati zvatsikiswa mhedzisiro isati yagamuchirwa zvakanyanya.
Vention Kudzivirira chirwere cheshuga
Chirwere cheshuga idambudziko rakakura rinobata chikamu chakakura chehuwandu hwepasi rose. Ongororo ichangoburwa yakaitwa pamhando dzemhuka yakawana kuti kushandiswa kweCBD mumakonzo asina-kufutisa kunogona kudzikira zvakanyanya chiitiko cheshuga. Muchidzidzo ichi, pakati peboka revano pindirana neboka re placebo, pakanga paine kuderera kwakanyanya mune chiitiko cheshuga kubva pa 86 muzana kusvika makumi matatu muzana.
Zvakare, chidzidzo ichi chakawana kuti kushandiswa kweCBDD kunogona kukonzera kudzikira kwechirwere cheshuga semhedzisiro yekurwisa-kuzvimba uye masimba ekumusoro kwemuviri weiyo cannabinoid. Kushandiswa kweCDD mune idzi mhuka modhi zvakare kwakakonzeresa kunonoka kutanga kweanoparadza insulitis, imwe yemaitiro akakosha anokonzera insulin kudzikisira chirwere cheshuga.
CBD ikomboni inowanika zvakanyanya inowanikwawo nenzira dzakasiyana kuita kuti hurongwa hwekushandisa hwese huve nyore kune vashandisi. Nzira dzakajairika dzekushandisa kana kushandisa CBD dzinosanganisira, asi hadziganhurirwe ku:
→ CBD Misoro yezvisikwa
Aya maficha ane CBD uye anoshandiswa kutungamira kwekurwadziwa, kuzvimba, kuzvimba, kutsamwa kweganda, uye kunyange acne. CBD misoro yemafuta anofanirwa kushandiswa sechero chimwe chigadzirwa cheganda uye yoiswa pachikamu cheganda chaida kurapwa.
Kana uchitenga CBD misoro uye makirimu, zvakakosha kutenga chigadzirwa chine imwe mhando yeanotechnology kana micellization iyo inobvumidza izvo zvigadzirwa zvemusoro wetsiva, senge CBD, kuti inyurwe neganda uye kurapa kubva mukati. Pasina nzira idzi dzekumwa panzvimbo, maBDD-ane mamiririri anongogara pamusoro uye asingabuditse zvinobatsira chero zvodii.
CBD kana yafemerwa kuburikidza nemhepo inobvumira iyo CBD kuti inyure nekukurumidza mumuviri, uye ibudise mabhenefiti nekukurumidza kupfuura chero imwe fomu. Sezvo yakafemerwa mumapapu yobva yapfuura ichienda muropa, CBD mune vape inodarika yekutanga-kupfuura metabolism iyo inowanzo kutora nguva yakareba uye inodzivirira kukurumidza kuita kweCDD. Izvo hazvisizvo nezvakaita CBD vapes uye iyi nzira yekushandisa CBD inonyanya kuzivikanwa pakati pevechidiki vanhu. Kunyangwe CBD iine yekukurumidza kosi yekuita kana ichishandiswa mune vape fomu, zvakare ine inokurumidza metabolism uye iri muropa chete kwerinenge maminetsi gumi, zvichireva kuti kushanda kwese kweBBB vapes kunotora kwemaminitsi gumi.
Nekudaro, zvakakosha kuti uzive kuti vapes haisi nzira ine hutano yekushandisa CBD kana chero chimwe chigadzirwa chakadai. Vaping inoonekwa sehutano pane kuputa asi ichiri isina hutano uye inoda kudzivirirwa, kunyanya sezvo mamwe marudzi eCBD aripo nyore uye achiwanika.
→ CBD Makapu uye Mahwendefa
Iyi fomu yeCBD ndiyo inonyanya kugadziriswa yekudyiwa kweCBD uye inobvumira vashandisi kudya cannabidiol mune akasiyana madhisiki, zvichienderana nezvavanoda uye zvavanoda. Iyo yakajairwa muyero weCBB capsules uye mapiritsi ari pakati pe5 mg uye 25 mg.
→ CBD Fungisisa
CBD inoisa mukati, sezita zvarinoreva, iine fomu yakadzika yeCBD. Paavhareji, izvi zvigadzirwa zvinouya neanoshanda uye zvakapetwa kazana zvakapetwa kupfuura zvimwe zvigadzirwa zveCBD uye mafomu. Inowanikwa muhupfu fomu, ichi chigadzirwa chinofanira kuchengetwa mumuromo kwechinguva chisati chamedzwa kubvumira CBD kuti inyurwe sublingually pamwe chete neyekutanga-kupfuura metabolism mushure mekunge yamedzwa.
→ CBD Mafuta neTinctures
CBDOils uye tinctures zvakare ine yakanyanya kuwanda kweCBD inowanzo kubva 100 mg kusvika 1500 mg. Sezvo izvi zvakare zvichidyiwa nemuromo, zvakakosha kuti utarise muyero uye kudzivirira kuwandisa sezvo izvo zvinogona kuwedzera njodzi yemhedzisiro uye kudzora mhedzisiro inobatsira yeCBD.
→ CBD mwaya
Iyi fomu yeCBD ndiyo imwe nzira nyowani yekushandisa uye, kana ichienzaniswa nemamwe mafomu, ine yakadzika kwazvo CBD. Izvo zvakajairika zvemukati zveCBD mune izvi zvinyoro zvinotangira kubva 1 mg kusvika 3 mg pa spray.
Side Migumisiro yeCDD
CBD chigadzirwa chakakurumbira icho chiri kushandiswa zvakanyanya nevakuru vechidiki uye vanhu vepakati nepakati. Kunyangwe chiri chokwadi kuti cannabidiol powder ine akati wandei masayendisiti anoratidzwa mabhenefiti ane hukama nazvo, zvakakosha kuti uzive kuti nezvakanaka izvi, kune mashoma mhedzisiro ane chekuita nekushandisa kweCBD. Iyi mhedzisiro inoonekwa kana CBD inotorwa nemuromo, kana kuburikidza nemuromo. Hazvina kukwana tsvakiridzo yakaitwa kuti uzive mhedzisiro mhedzisiro inogona kukura neakasiyana mafomu ekushandisa.
Mhedzisiro mhedzisiro yeCDD inosanganisira:
Kuderera kweropa kana hypotension
Yakaoma muromo kana Xerostomia
Mazhinji emhedzisiro iyi haana kunyanyisa uye anozogadzirisa zvoga. Zvigadzirwa zveCBDD zvinogona kushandiswa kweanosvika kumavhiki gumi nematatu zvichiramba, paine muyero wakachengeteka we13mg pazuva, Epidiolex inosanganiswa nekukuvara kwechiropa kwakanyanya kana ikatorwa muyero yepamusoro sezvo mushonga unobvumidzwa kushandiswa pane imwe nhanho yakatokura kupfuura 200mg pazuva , kunyange hazvo chiri chisingawanzoitika dambudziko.
Kunogoneka kudyidzana uye Zvakakosha Kuchengetedza kweBDD
CBD inowanzoonekwa seinoregererwa nevazhinji vevakuru uye vechidiki-vakuru mazera uye inokwanisa kuburitsa zvakanakira izvi vanhu. Nekudaro, zvakakosha kuti uzive kuti kune zvakakosha zvekuchengetedza zvinofanirwa kutorwa kune vamwe vanhu vanogona kufarira kutora CBD. Izvi zvinodzivirira ndezvevanhu vari kurwara nechirwere chechiropa kana chirwere cheParkinson. Aya mamiriro anoshandura kushanda kwezvigadzirwa zveCDD uye kutarisirwa kwakakosha kunofanirwa kutorwa nevarwere ava kana vakasarudza kutora CBD.
Varwere vane chirwere chechiropa vanogona vachiri kutora CBD zvisinei, ivo vanozodikanwa kuti vatore madosi epasi eCBDD, kupfuura avhareji yemunhu sezvo chiropa chavo chisingakwanise kugaya zvigadzirwa pachiyero chayo. Kutsvagurudza kunoratidza kuti yakaderera masosi eCBD haakanganise kana kuisa kumanikidza pachiropa chinorwara, zvichireva kuti varwere ava vanogona kutora zvakachengeteka zvigadzirwa zveCBD.
Varwere vanorwara nechirwere chePasinson vane zviratidzo zvekuzorora kudedera uye kufamba kwakashata kwemhasuru. Zviratidzo izvi zvinotendwa kuti zvakawedzeredzwa nekushandiswa kwe CBD zvigadzirwa, Ndokusaka varwere vaParkinson vachidikanwa kurega kushandisa chero cheichi chigadzirwa.
Zvigadzirwa zveCDD zvakare hazvikurudzirwe kuvana, kunyangwe zvisingazivikanwe kuti mhedzisiro inogona kunge iripi pazera iri. Epidiolex, iyo mishonga inoshandiswa kune manejimendi uye kurapwa kwekugwinha, inogara ichinyorerwa kuvana vanotambura nezvinetso izvi zvekubata. Sekureva kweDAA, mushonga wakachengeteka kushandisa muvana asi hazvizivikanwe kana mumwe CBD zvigadzirwa dzakachengeteka kana dzinoshanda muvana. Kusvikira kumwe kutsvagisa kwaitwa, zvakanakisa kudzivirira kupa vana zvigadzirwa zveCDD kunze kweEpidiolex.
Vakadzi vane pamuviri uye vakadzi vari kuyamwisa vanokumbirwa kutora matanho ekuzvidzivirira uye kurega kushandisa zvigadzirwa zveCDD. Nekudaro, izvi hazvinyanyo kukonzerwa nemhedzisiro yeCBD, izvo zvisati zvichizivikanwa, asi asi nekuda kwekugona kuti zvigadzirwa izvi zvinogona kusvibiswa nehupfu kana zvinhu zvinokuvadza zvinogona kukuvadza mukadzi kana mwana ari kukura. Sezvo zvingave zvisingakwanisike kuti munhu wese ave nechokwadi chekuchengetedzwa kwezvigadzirwa zvavanoshandisa, zvakanakisa kudzivirira zvigadzirwa zveCDD zvese panguva ino.
Kunze kwekungwarira kwakataurwa pamusoro apa, hapana chinozivikanwa nezve kudyidzana kwezvinodhaka neCBD.
Ndeapi mafomu ari CBD Zvigadzirwa zvakagadzirwa muAASraw?
MUTSVENE ndeyechokwadi sosi ye steroid mapoda, mahormone ebonde, uye akangwara madhiragi. AASraw zvakare iri CBD kupatsanura mugadziri uye mutengesi, inogadzira mhando yepamusoro, yakachengeteka kushandisa, uye inoshanda CBD zvigadzirwa. CBD chigadzirwa chakachinjika chinowanikwa nenzira dzakasiyana asi havazi vese vagadziri vanogadzira uye vanogadzira ese akasiyana mafomu eCDD. Fekitori yeCDD inogona kugadzira mhando dzakasiyana dzezvigadzirwa, uye kwete ese mafomu ekugona kutarisa zvakanyanya pahunhu uye kuchengetedzeka kwechigadzirwa.
AASraw inogadzira poda yeCDD uye inogadzirawo CBD oiri, ose ari maviri anofarirwa zvikuru uye ari kunyanya kudiwa. Zvigadzirwa zvinogadzirwa neAASraw zvinosanganisira:
→ CBD Upfu
CBD Powder kana concentrate chimiro che cannabidiol iyo inogadzirwa zvakanyanya uye inotengeswa nevanhu vazhinji vanoedza tenga CBD upfu sezvo iri nyore kushandisa uye inoshanda mukugadzira mhedzisiro. MUTSVENE une imwe mhando yeCDD poda inowanikwa yekutengesa, iyo inogadzirwa mufekitori umo nhungamiro dzekuchengetedza uye maprotocol anoteverwa nemazvo zvakakwana. Izvi zvinovimbisa kuchengetedzeka uye kushanda kwezvigadzirwa, izvo AASraw, iyo CBD poda inogadzira uye CBD poda mupi, anozvisimbisa uye anozvikudza pachayo.
Iyo CBD poda inogadzira zvakare inoona kuti zvigadzirwa hazvina kusvibiswa nechero chepfu kana zvinhu zvinokuvadza panguva yekugadzira kana yekupakata maitiro mufekitori yeCDD. Uyezve, AASraw ine trackable mhando kutonga munzvimbo kuti mune zvisingawanzo kuitika zvehunhu nyaya, inobatsira kuteedzera uye kuyeuka zvese zvigadzirwa zvakagadzirwa mune iyo batch.
Iyo CBD poda inogadzirwa neAASraw inonzi seMvura-inogadziriswa CBD Powder uye chena kuti ichene-chena poda ine 10 muzana CBD. Ichi chigadzirwa hachina THC uye imwe 90 muzana yehupfu inoumbwa nemushonga uye zvisungo zvinobatsira kuwedzeredza zvinobatsira zveCDD uye zvinobvumidza chigadzirwa kuti chigare pamwe uye chigare kwenguva yakareba.
Iyo yemvura-yakanyungudika CBD poda inofanirwa kuve yakasanganiswa nemvura kugadzira mhinduro ine mvura kana ichida kutorwa. Iyo yemvura inogadziriswa inoda kunyatsosanganiswa uye kuzununguswa, izvo zvinogona kuita kuti mhinduro ive furo. Ndiwo marongero akajairika echigadzirwa uye ndiwo marongero anofanira kuitwa.
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti CBD poda inofanirwa kuchengetwa nenzira kwayo, kure nezuva. Uyezve, hapana kana hupfu hunofanira kusangana neacid kana chigadziko sezvo icho chingaite nehupfu.
→ CBD Mafuta
CBD Mafuta, sezvataurwa pamusoro apa, ane simba mafomu eCDD sezvo iwo aine yakanyanya kusangana ye CBD uchienzaniswa nemamwe mafomu. AASraw's CBD mairi ese anogadzirwa mune Yakanaka Kugadzira Maitiro kana GMP yakasimbiswa nzvimbo, ichivimbisa kugona uye kushanda kwemafuta eCBD. Ose maoiri eCDD nezvimwe zvigadzirwa zvinogadzirwa neAASraw zvinogadzirwa kuona kuti hapana zvakasvibisa muzvigadzirwa zvavo uye kuti zvakaomarara sezvinobvira.
Kune mhando mbiri dzakasiyana dzeCDD dzemafuta dzakagadzirwa neAASraw, sezvataurwa pazasi:
· Hemp Essential Oiri
CBD Hemp Oiri ari kuwana mukurumbira nekuda kwezvakawanda zvakanakira zvigadzirwa izvi, sezvataurwa pamusoro apa. Oiri anonyanya kuzivikanwa kupfuura mamwe mafomu eCDD zvigadzirwa nekuti ane akanyanya kuwanda kuwanda kweCBD.
Hemp Essential Oiri ne AASraw iyo viscous, nhema, uye yero mafuta ayo akaomeswa zvakanyanya uye akatsiga. Inofanirwa kuchengetwa pakushambidzika kwemukati uye kure nezuva kuti ive nechokwadi chekubatsira kwakanyanya uye hupenyu hwakareba hwechigadzirwa. Ichi chigadzirwa neASASraw's CBD fekitori yechitatu-bato kuyedzwa uye kunowanikwa munzvimbo dzakasiyana siyana, iine CBD kana isina kujeka spectrum cannabinoids.
Ichi chigadzirwa halal, Kosher, uye zvachose isina THC asi izere neisina-psychoactive cannabinoids yeiyo hemp chirimwa.
· Goridhe Hemp Mafuta
Goridhe Hemp Mafuta neAASraw ndeyechitatu-bato rakaedzwa, yemhando yepamusoro cannabinoid mafuta akapfuma mune yakazara-spectrum cannabinoids. Iyi brown yero ku brown-nhema semi-viscous oiri inotengeswa mumapakeji akasiyana, uye zvinokwanisika kutenga izvi zvakananga kubva kuAASraw's CBD fekitori kunyanya kana kuwanda kwakanyanya kweCDD kuchidikanwa mumafuta.
Chigadzirwa chinouya nemazano akakosha pane chekuchengetedza sezvo chengetedzo isiriyo inogona kupa kuti chigadzirwa chisashande. Izvo zvakakoshawo kuziva kuti izvo cannabinoids mune ichi chigadzirwa chinogona kujekesa nekufamba kwenguva. Izvi hazvireve kuti chigadzirwa hachichashandisike asi panzvimbo pacho kupisa mafuta nekuisa mumvura inodziya yekushambidza kunopedza makristasi, zvichibvumira mafuta kuti ashandiswe sepakutanga.
Nzira Yokusarudza Sei Akanaka Mugadziri weCBD Chigadzirwa?
Vanoverengeka CBD vagadziri vehupfu vanovimbisa kuti zvigadzirwa zvavo zvine yakachena, yemhando yepamusoro CBD asi izvo zvinowanzove kure nechokwadi. Izvo zvakakosha kuti utenge CBD hupfu kubva kune vakavimbika vatengesi vanoteedzera kuchengetedzeka mirau uye vane akakodzera mhando yekutarisa kuti ave nechokwadi chekuchengetedza, kushanda, uye simba rechigadzirwa.
Zvakare, zvakakosha kuti utenge CBD poda kubva kune vagadziri vanopa zvigadzirwa izvo zvisingaongororwe chete neiyo CBD poda inogadzira uye mutengesi pachayo asiwo nevechitatu mapato izvo zvinoenderera mberi nekuvimbisa mhando yechigadzirwa chekupedzisira chisati chatumirwa kumisika. kushandiswa nevatengi vakasiyana. Kana chigadzirwa chikatadza iyi yechitatu-bato rebvunzo bvunzo, inofanirwa kuve inotsamwiswa nemugadziri uyo anozofanira kuongorora kuti nei chigadzirwa chakatadza cheki yemhando uye chinofanira kugadzirisa izvo zvinhu zvisati zvagadzirwa zvigadzirwa zvitsva nekuzvipa.
Kunyanya kana uchitenga CBD yakawanda kana kuisa CBD upfu maodha mazhinji, zvakakosha kuti unyatso tsvagisa chigadzirwa uye mugadziri kudzivirira chero nyaya neicho chigadzirwa chekupedzisira chinowanikwa mune yakasara. Kana zvikomborero zvakakura zveCDD zvichidikanwa, kumwezve kubvunzurudza kumugadziri kunofanirwa kuitiswa kuti uone kuti chigadzirwa chaunotenga chakapfuma muhuwandu hweCBD, uye CBD chete. Chigadzirwa hachifanirwe kunge chiine THC kana mamwe ma cannabinoid ayo anoderedza mhedzisiro yeCBD kana kuidzivirira kuti isashande izere.
 Lucas CJ, Galettis P, Schneider J (Mbudzi 2018). "Iyo pharmacokinetics uye iyo pharmacodynamics ye cannabinoids". British Zvinyorwa zveKiriniki Pharmacology. 84 (11): 2477–2482. doi: 10.1111 / bcp.13710. PMC 6177698. PMID 30001569.
 Zhang M. "Kwete, CBD Haisi 'Yemutemo muMatunhu Ese makumi mashanu". Forbes. Yakadzorerwa Mbudzi 50, 27.
 Klein C, Karanges E, Spiro A, Wong A, Spencer J, Huynh T, uye al. (Mbudzi 2011). "Cannabidiol potentiates Δ9-tetrahydrocannabinol (THC) maitiro ekuchinja uye zvinoshandura THC pharmacokinetics panguva yekurapa uye kusingaperi kurapwa mumakonzo ekuyaruka". Psychopharmacology. 218 (2): 443-57. doi: 10.1007 / s00213-011-2342-0. PMID 21667074. S2CID 6240926.
 Adams R, Hunt M, Clark JH (1940). "Maumbirwo e cannabidiol, chigadzirwa chakasarudzika kubva kunotora marihuana yeMinnesota wild hemp". Zvinyorwa zveAmerican Chemical Society. 62 (1): 196-200. doi: 10.1021 / ja01858a058. ISSN 0002-7863.
 Gaoni Y, Mechoulam R (1966). "Hashish-VII Kumisikidzwa kwe cannabidiol kune tetrahydrocannabinols" Tetrahedron. 22 (4): 1481–1488. doi: 10.1016 / S0040-4020 (01) 99446-3
 Abernethy A, Schiller L (Chikunguru 17, 2019). "FDA Inozvipira kune Ruzha, Sayenzi-yakavakirwa Policy paCDD". US Kudya neDrug Administration (FDA). Yakadzorerwa Gumiguru 17, 2019.
 Gunn L, Haigh L (Ndira 29, 2019). "Muchengeti weBritish anoona CBD chikafu cheinovel, inotsvaga kudzora kutengeswa pamusika weUK". Kudya zvinovaka muviri Insight, CNS Media BV. Yakachengetwa kubva kune yekutanga muna Kukadzi 2, 2019. Yakadzoreredzwa Ndira 1, 2019.
 Arnold M (Chikunguru 30, 2019). "Sweden Inobatana neItaly munzira yekutsanangura Mitemo yeMafuta eCD". Cannabis Indasitiri Chinyorwa. Yakadzorerwa Nyamavhuvhu 3, 2020.
 "Cannabinoids, yakatsvaga muEU Novel chikafu katalog (v.1.1)". European Commission. Ndira 1, 2019. Yakadzoreredzwa Kukadzi 1, 2019.
 Todorova S. "Kukura kwecannabis muBulgaria: Zviri pamutemo asi zvichiri kushorwa". Lexology. Yakadzorerwa Nyamavhuvhu 3, 2020.
 Hurumende yeAustralia Dhipatimendi Rezvehutano Kurapa Kwezvinhu Zvekufambisa (Kubvumbi 24, 2020). "Kubvunzana: Zvirongwa zvakachinjwa kuMutemo wePoison - Misangano Joint ACMS / ACCS, Chikumi 2020". Kurapa Kwezvinhu Zvekuita (TGA). Yakadzorerwa Mbudzi 25, 2020.
 "Yambiro Yetsamba uye Ongororo Mhedzisiro yeCannabidiol-Inoenderana Zvigadzirwa". US Kudya neDrug Administration (FDA). Mbudzi 2, 2017. Yakadzorerwa Ndira 2, 2018.
 Kogan L, Hellyer P, Kuderera R (2020). "Hemp Mafuta Anobvisa Kurapa Canine Osteoarthritis-Inosanganisa Kurwadziwa: Chidzidzo chePilot". Zvinyorwa zveAmerican Holistic Veterinary Medical Association. 58: 35-45.